Ndị na-emepụta Chef Hats - China Chef Hats Ndị Arụ & Factory
Pinezed Chef hat Poly Cotton Wine Red Agba Chef Hat U402S0400A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U402S0400A Size ONE SIZE ቁልፍ okwu chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, o nweghi ahihia, enweghi carcinogens, ndu oru bu oge 2 dika uwe ndi ozo. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, hygrosco dị mma…
Plyated Chef hat Poly Cotton Black Chef Hat U404S0100A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U404S0100A Size S, M, L Key word chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, oghaghi oria, enweghi carcinogens, ndu ije ozi bu oge 2 dika nke mgbe nile. kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopic…
Plyated Chef okpu Poly Cotton White Chef Hat U404S0200A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U404S0200A Size S, M, L Key word chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, oghaghi oria, enweghi carcinogens, ndu ije ozi bu oge 2 dika nke mgbe nile. kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopic…
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU404S0100A Size ONE SIZE ቁልፍ okwu chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu ogologo-owu akwa, enweghị ego, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka mkpuchi isi oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, obere nkụda mmụọ, hygrosc dị mma…
Pinezed Chef hat Poly Cotton Wine Red Agba Chef Hat U404S0400A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U404S0400A Size S, M, L Key word chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, ogha adighi, enweghi carcinogens, ndu oru bu oge 2 dika nke kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopic…
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU404S0200A Size ONE SIZE ቁልፍ okwu chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu ogologo-owu akwa, enweghị ego, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe chef. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, obere nkụda mmụọ, hygrosc dị mma…
Unisex Poly Cotton gbara ọchịchịrị acha aja aja agba agba agba agba agba U404S1200A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U404S1200A Size S, M, L Key word chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, ogha adighi, enweghi carcinogens, ndu ije ozi bu oge 2 dika nke mgbe nile. kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopic…
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU405S0100A Size NA SIZE Isi okwu chef hat Fabric 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu ogologo-owu akwa, enweghị ego, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe chef. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, obere nkụda mmụọ, hygrosc dị mma…
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U405S0100A Size ONE SIZE Key word chef hat, flat top chef okpu, Japanese chef hat Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, o nweghi carcinogens, oru ndu bụ oge 2 dịka akwa onye isi oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, ezigbo abrasion resi ...
Poly Black Black White Strip Flat Top Chef Hat CU405S8600H
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU405S8600H Size NA SIZE Isi okwu chef hat Fabric 65/35 poly / cotton Xinjiang Aksu ogologo-owu, enweghị ego, enweghị ihe na - emebi emebi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, ihe dị ala, ezigbo hygroscopicity a…
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U405S8300H Size ONE SIZE Key word chef hat, flat top chef hat, Japanese chef hat Fabric poly / cotton Xinjiang Aksu ogologo-staple owu, enweghị ego, onweghi mbibi, enweghi carcinogens, ndu oru bu oge 2 dika nke kootu. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, obere ala ...
Poly Cotton Black Chef Hat nke nwere akpa akpa uwe CU413S0100A
Brand CHECKEDOUT Nkebi koodu CU413S0100A Size NA SIZE Isi okwu chef hat Fabric 65/35 poly / owu GSM.235g Xinjiang Aksu ogologo-owu akwa, enweghị ego, enweghị mbibi, enweghị carcinogens, ndụ ọrụ bụ oge 2 dị ka uwe isi oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide nke abrasion dị mma, obere nkụda mmụọ, hygrosc dị mma…